Dhul qoyan: waa maxay, astaamaha, kala duwanaanshaha noolaha iyo muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
Nidaamyada deegaanka ee dabiiciga ah ee muhiimada deegaanka iyo dayactirka noolaha, waxaa ka mid ah dhul qoyan. Himilada sanadlaha ah ayaa ah in dadka laga dhaadhiciyo baahida loo qabo in la ilaaliyo nidaamyadan dabiiciga ah ee qaaliga ah. Sidaa darteed, Febraayo 2 ee sannad kasta waa Maalinta Adduunka Qoyaanka. Dhul qoyan waa nidaam deegaan oo ciiddu si joogto ah ama xilliyo ah u dhex galaan biyo. Tani waxay ku dhici kartaa nidaamyada deegaanka ee biyaha macaan iyo meelaha qaarkood oo leh xaddiga cusbada.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa waxa ay yihiin dhulalka qoyan, maxay yihiin astaamaha ugu waaweyn iyo sida ay muhiimka u yihiin.
1 Waa maxay dhul qoyan
2 Noocyada dhulka qoyan
4 Muhiimadda deegaanka ee dhirta qoyan
Waa maxay dhul qoyan
Waa nidaam dabiici ah oo dabiici ah, oo leh dheelitirka bey'adda, kuna saleysan carro si joogto ah ama joogto ah daadadku u galaan. Nidaamyadan deegaanka waxay ka muuqan karaan meelaha ay ku jiraan biyo macaan ama ay ku jiraan biyo cusbo leh. Astaamahan awgood, dhulka qoyan wuu awoodaa dayactir tiro badan oo kala duwanaanshaha noolaha ah isla markaana ku deeqsiinta hantida dabiiciga ah kala duwanaansho kaladuwan.
Maalinta Qoyaanka Adduunka waxay xoojineysaa muhiimadda dhulka qoyan maxaa yeelay waxay muhiim u yihiin nolosheena waara ee soo socda. Qoyaanka qoyan waxay noqon karaan kuwo dabiici ah ama dad sameystay. Noocyada qaarkood ee dhirta qoyan ee dabiiciga ah waxay ku fidi karaan qoyan, dhiiqo qaar ka mid ah iyo aagaggooda biyo-qoyan, qolofleyda, iwm. Dhinaca kale, waxaan arki karnaa dhul qoyan oo si dabiici ah loo abuuray ama wax looga beddelay. Mar kasta oo xaaladaha deegaanku oggolaadaan, si dabiici ah ayaa u hayn kara qoyaan ku meelgaar ah oo joogto ah.
Guud ahaan, noocyadaan qoyan ee la dhisay waxaa loo dhisay in lagu ilaaliyo kala duwanaanshaha noolaha ee halista ugu jira baabi'inta. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa ujeedooyinka dalxiiska si loo bixiyo adeegyo deegaanka ah isla markaana looga caawiyo faafinta qiimaha ilaalinta dabeecadda.
Noocyada dhulka qoyan
Maaddaama buuraleydan ay hodan yihiin, waxay noqdeen aalado muhiim u ah ilaalinta dabeecadda. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah dhul-qoyan, waxaana loo kala saaraa nooca biyaha sameeya iyo astaamaha kale ee ay tahay inaan raacno. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya noocyada dhirta qoyan waa nooca biyaha. Waxaan ogaaneynaa dhul qoyan oo biyo macaan leh iyo biyo qoyan. Waxaan sidoo kale kala saari karnaa dhulka qoyan ee dabiiciga ah iyo qoyaanka ay dadku sameeyeen.
Aan aragno noocyada kala duwan ee dhul qoyan:
Wabiga qoyan: Waa dhul qoyan oo leh astaamo dabiici ah iyo nooca biyo macaan. Badanaa waxay ka kooban yihiin wabiyaal, durdurro, iyo biyo-dhacyo.
Harooyinka qoyan: Waxay ka sameysmaan harooyinka iyo qaar dabiici ah harooyinka biyaha macaan.
Xawaaraha Tropical: Waxaa ku jira aagag leh ilo yar, oase, dhul daadad, kaymo qoyan, dhiiqo, iyo bogs. Astaamaha ugu muhiimsan ee noocan ah qoyaanka qoyan ayaa ah inay dhammaantood leeyihiin ilo dabiici ah biyuhuna ay cusub yihiin.
Meelaha qoyan ee badda: Sida magaca ka muuqata, waa dhul dabiici ah oo qoyan, laakiin waxay ka kooban yihiin biyo cusbo leh. Badanaa waxay ka muuqdaan deegaanno xeebeed oo baddu gacmaheeda ku yartahay, sida qaar dhagax leh, xeebo ciid ah iyo meelo quruurux ah.
Macmal ah: Waa meelahaas qoyan ee laga soo saaro shaqooyinka qofka bini-aadamka ah iyada oo ujeedadu tahay in la keydiyo ama la xakameeyo xaddi biyo ah. Halkan waxaan ku arki karnaa kaydadka iyo biyo xireennada. Waxay sidoo kale yeelan karaan ujeedada ah in la ilaaliyo qaddar ama noocyo ka mid ah dhirta iyo xayawaanka la ilaaliyo.
Tirada: webiyaal badan ayaa sameeya estuaries ka hor afkooda ugu dambeeya qaarkoodna dhul qoyan ayaa laga soo saaraa. Sifada ugu weyn ee ay leeyihiin waa inay ka kooban yihiin biyo cusbo leh oo laga soo qaado estuaries waana asal dabiici ah. Mararka qaarkood waxay awood u leedahay inay sameysato qulqulo biyo cusbo leh ama aagag mangrove ah.
Meelaha qoyan ee harada Waxay umuuqataa wax badan sidii kuwii hore, laakiin harooyinka iyo harooyinka labaduba waa xarago maadaama laga helo dhulka xeebta ku yaal. Waxay sidoo kale leeyihiin asal dabiici ah.
Nidaamka deegaanka si loogu tixgeliyo dhul qoyan, waa inuu la kulmaa astaamaha soo socda:
Waa la tixgeliyaa aagagga isbeddelka ama isbeddelada tartiib-tartiibka ah ee u dhexeeya nidaamyada biyaha iyo dhulka. Taasi waa, waxaa loo tixgeliyaa nidaamyo isku dhafan oo isku dhafan sababtoo ah waxay ilaaliyaan qaar ka mid ah astaamaha nidaam deegaan iyo mid kale. Waxaan ogaanay in qeybaha qaar ay diirada saarayaan nidaamka deegaanka deegaanka, halka qaarna ay diirada saarayaan nidaamka deegaanka.
Waa aagagga daadadka, marka waxay noqon karaan aagag ku meel gaar ah ama joogto ah. Meelo ku-meelgaar ah ayaa ka muuqda meelaha leh niyad-jabka yaryar, kuwaas oo si fudud u fataha marka roobku si xoog leh u da'o.
Biyaha Wetland waa inay ahaadaan biyo fadhiya, durdurro yaryar, biyo macaan ama biyo cusbo leh, oo waxaa ku jira aagag yar yar oo badda leh oo qoto dheer leh. Saamaynta qulqulka ee dhulka qoyan aad ayuu u hooseeyaa. Badanaa saameyntani kama badnaan doonto 6 mitir.
Xadka dhul qoyan waxaa lagu go'aamin doonaa nooca dhirta ee dhul kasta. Dhirta waa biyo-biyood, taasi waa, waxay u baahan tahay u janjeera wanaagsan ee biyaha. Waxa kale oo suuragal ah in la kala saaro dhirta aan-biyo-biyoodka ahayn iyo dhirta matalaysa soohdinta dhul-qoyan, halkaasoo nidaam kale oo deegaan ku dhammaado kuna bilaabmayo jawi gebi ahaanba dhulka ah.
Wetland waa deegaan ku habboon noocyo fara badangaar ahaan shimbiraha guurguura ee quudiya kuna nasta dhulka qoyan ee adduunka. Waxaan kaloo heli karnaa dhir iyo xayawaan sida naasleyda, xamaarato, xamaarato, kalluun iyo cayayaan.
Muhiimadda deegaanka ee dhirta qoyan
Dhulka qoyan waa nidaam deegaan oo aad muhiim ugu ah shaqada caadiga ah ee dabiiciga. Waxay awood u leeyihiin inay ku noolaadaan nooleynta tiro badan oo shimbiro ah, kalluun iyo kooxo kale oo xayawaan ah. Waxay kaloo soosaaraan dhir ku tiirsan biyaha.
Hadaan kudareyno qiime aduunyada, dhulka qoyan wuxuu abuuri karaa aag wax soo saar cunno wuxuuna ubaahanyahay biyo badan inuu baxo, sida bariiska. Waxyaabaha kale ee aadka muhiimka u ah in qoyaanka la ilaaliyo ayaa ah xakamaynta wareegga biyaha, oo ay ku jiraan dusha iyo aquifers. Waxay sidoo kale si firfircoon ugu lug leedahay xakamaynta nabaad-guurka iyo nidaaminta wareegyada nafaqada.
Sababtaas awgeed, inta badan dhulka qoyan waxay leeyihiin nidaam difaac oo loo arko inuu yahay keyd dabiici ah. Qeybtaan iyo qeybta awooda xukunka ilaalinta hawlaha dhaqaale waxay ku kooban yihiin cilmi baarista iyo soo galitaanka dalxiisayaasha oo aad loo xakameeyo. Waxaas oo dhan waxaa loo sameeyaa si loo ilaaliyo noolaha ugu badan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto waxa ay yihiin dhul qoyan iyo muhiimadda ay leeyihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Dhul qoyan
Waa maxay dhagax
Sidee god madow u samaysmaa